Oniversiten’Antananarivo: hiverina hiasa ny mpampianatra sy ny mpandraharaha | NewsMada
Oniversiten’Antananarivo: hiverina hiasa ny mpampianatra sy ny mpandraharaha
Hampitsahatra ny fitokonana, manomboka anio, ny mpampianatra mpikaroka mpikambana amin’ny Seces eto Antananarivo sy ny mpandraharaha ary ny mpianatra fa hiverina hiasa eny amin’ny oniversiten’Antananarivo. Fanambarana nataon’ny filohan’ny Seces Antananarivo, Ravelonirina Sammy Grégoire, omaly, izany taorian’ny fivoriambe nataon’ny mpampianatra teny Ankatso. Nanao dingana ny fitondrana nihaino ny fitakiana, ny alatsinainy lasa teo, nahitana ny filoha sy ny minisitry ny Fampianarana ambony ary voalaza fa vonona ny hifampidinika ny roa tonta. Noho izany, hiroso amin’ny asa fampianarana sy fikarohana ny mpampianatra miaraka amin’ny fifampidinihana hijerena vahaolana maharitra. Roa na telo herinandro eo ho eo ny fampiatoana ny fitokonana mandra-pahita ny tena fandraisana andraikitry ny fanjakana tokoa. Miankina amin’izay ny fivoaran’ny raharaha.
Zavatra takin’ny mpampianatra ny fanefana ny saran’ny ora fanampiny sy ny fampiharana ny didy efa navoaka momba ny tombontsoa samihafa. Ho an’ny mpianatra, angatahin’izy ireo ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ilaina amin’ny fampiharana ny rafitra LMD sy ny fampiakarana ny vatsim-pianarana. Mitaky ny handoavana ny karama ara-potoana sy hanondrotana ny « indemnité » maromaro kosa ny mpandraharaha eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Nilamina indray aloha izany ny toe-draharaha eny amin’ny oniversite ary miandry ny fanatanterahan’ny fanjakana ny didy efa nivoaka. « Ireo zavatra azo efaina izao, tokony tsy hangatahina andro intsony », hoy ny fanazavan’ny filohan’ny Seces.